Maxaa kala heysta reer galbeedka iyo Putin - BBC News Somali
Maxaa kala heysta reer galbeedka iyo Putin
Khudbada Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin, ayaa waxa uu ku muujiyay in dhaqaalaha Ruushka uu hoos udhac ku yimid, qiimaha gaaska ayaa hoos u dhacay taas oo sabab u ah cunaqabateynta ay reer galbeedka saareen dalkaasi.
Fariinta kasoo yeertay maanta madaxweynaha dalka Ruushka ayaanan ahayn mid uu ku qaladan yahay.
Vladamir Putin ayaa Xilligii uu u jeedinayay khudbadan dadkiisa, ayaa waxa uu ku eedeeyay reer galbeedka rabshadaha ka aloosan Ukrain, isaga oo sidoo kalana ku eedeeyay hoggaamiyayaasha reer galbeedka in ay jees jees cad sameynayaan.
Waxa uu yiri Mr. Putin, xitaa hadii aysan jiri lahayn dhibaatada Ukrain, dowladdaha reer galbeedka waxa ay la imaan la haayeen cudur daar kale si cunaqabateyn loo saaro dalka Ruushka.
Madaxweyne Vladamir waxa uu ku eedeeyay reer galbeedka in ay rabaan waxa uu ugu yeeray xaaladii Yugaslaafiya si lagu furfuro laguna kal gooyo Ruushka.
Hoggaamiyaha Kremlin-ka ayaa sheegay in aysan ka shalaayeynin qabsashada Crimea, isaga oo ku tilmaamay in Crimea ay macna weyn u leedahay Ruushka.
Si si wanaagsan uu ugu dhaqaaqo dhaqaalaha Ruushka madaxweyne Putin, ayaa ballan qaaday in uu yareynayo canshuuraha dalkaasi afarta sano ee soo socota, waxa uuna sheegay in ay cafinayaan ganacsatada lacagahooda markii hore dalkaasi kala baxay, haddana dib ugu soo celiyay bangiyada dalkaasi.
Madaxweynaha ayaa qudbadiisa kusoo gabagabeeyay in dowladda Ruushka ay diyaar u ahayd in ay wajahdo caqabad kasto oo ku timaado ayna ka guuleysan doonaan.